Xayiraadii Garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado maanta la qaaday | SAHAN ONLINE
Xayiraadii Garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado maanta la qaaday
CADAADO – Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta soo saaray wareegto uu xayiraada uga qaadayo garoonka diyaaradaha Cadaado oo maalmihii lasoo dhaafat laga joojiyey diyaaradihii ka imaanayey Muqdisho.
Xayiraada laga qaaday garoonka diyaaradaha Cadaado iyo garoomada kale ee Galmudug ayaa ka dambeysay kadib markii baaq kasoo baxay odayaasha iyo waxgaradka degmada Cadaado ay ku baaqeen in la furo garoonka.
Afhayeenka Maamulka Galmudug Cabdullaahi Xaashi Roob da’ay ayaa sheegay in xayiraadii garoonka Cadaado ay maanta dhammaatay,Madaxweynuhuna uu fasaxay ,wixii hadda ka dambeeyana ay diyaaraduhu kasoo degi karaan.
Tallaabada lagu xayiray in diyaarado kasoo dagaan Cadaado ayaa ka dambeysay markii ay meel xun gaartay khilaafkii Madaxda Galmudug ,waxaana xayiraada diyaaradaha ay saameyn ku yeelatay Wafdi xildhibaano iyo Wasiiro oo doonayey iney Cadaado yimaadaan.
Dhanka kale diyaaradii u horeysay ayaa kasoo duushay garoonka diyaaradaha Cadaao,waxaana ay soo qaaday waftigii Xildhibaanada labada gole ee todobaadkii hore u tagay waan waanta xiisada Galmudug,iyagoona dib ugu laabtay Muqdisho.